Laghachite na ego maka SEO | Martech Zone
Fraịde, Septemba 9, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ihe omuma ihe omuma a site na DIYSEO na njikarịcha njikarịcha nchọnchọ na ntinye ego nwere ike ịwelite ajụjụ karịa ka ọ na-aza. M mgbe nile-enyo anyị enyo mgbe m hụrụ blanket na nkwupụta na otu ọwa dị mma karịa ndị ọzọ niile… dị ka ma ọ bụrụ na i kwesịrị ịhapụ ọ bụla ọzọ na-ajụ? Lee ụfọdụ ihe:
Nke a ọ bụ naanị otu mkpọsa ka ọ tụrụ? Ndị ọzọ okwu… ka ha na-atụ mmetụta nke ahịa email, ha na-agbakwunye na ndụ uru nke ndị debanyere aha na ndị na-esote ịzụrụ ha ga-eme n'okporo ụzọ ahụ? Echere m na ọ ga-abụrịrị na ha ahapụghị nke ahụ!
Dabere na saịtị abụọ, nke a bụ njedebe maka azụmaahịa niile? Echeghị m!
Kedu ka usoro ịkwụ ụgwọ ha kwa-akwụ si dị mma? Afọ ole ka ọ dị? Gini bu akara ad ha? Ndi ha kegidere ozi di iche na ndi ozo, ntughari nke kacha mma weghachite iweghachite ka iwelata nzaghachi?
Kedu ka asọmpi isiokwu ndị ahụ dị na asọmpi ole na ole ọ were iji mee ka ụlọ ọrụ nwee ọkwa nke ọma?
Ntinye ego na SEO gụnyere ọnụahịa nke ọdịnaya niile, imewe na nkwalite saịtị ahụ na mgbakwunye naanị ịhazi ya?
Enweghị m obi abụọ ọ bụla na SEO kwesịrị ịbụ isi ihe na atụmatụ ahịa ọ bụla n'ịntanetị. Ka oge na-aga, site na njikarịcha na saịtị na nkwalite saịtị, ụlọ ọrụ nwere ike ịbawanye ụba nke ndu, ogo nke ndị na-eduga, ma na-ebugharị ụgwọ kwa ndu iji bulie nloghachi na ntinye ego. IMO, ma, ihe omuma a nwere ike iduga ufodu ndi mmadu rue nkwubi okwu di iche.
Sep 11, 2011 na 12:53 PM
E zigara infographic ahụ na Disemba nke 2009. Ọ bụ ezie na anaghị m ekwu na ozi ahụ ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị eziokwu, data na-adaba na ahịa a ngwa ngwa n'ihi mgbanwe teknụzụ na ọnọdụ.
O doro anya na Social Media nwere mmetụta na ROI mana etinyebeghị ya na infographic a.
Ọ bụ oge iji wepụta nseta ọzọ nke otu data ahụ ma tulee. Layer na-elekọta mmadụ media mmetụta n'ime graphic.
Sep 11, 2011 na 6:27 PM
Nnukwu ntinye, Patrick! Ekwenyere m - na mgbasa ozi mmekọrịta na-emetụta nsonaazụ ọchụchọ ugbu a ka nsonaazụ ahụ ga-adị ntakịrị karịa.